Masuuliyiin kala duwan oo maanta gaaray Magaalada Jowhar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Masuuliyiin kala duwan oo maanta gaaray Magaalada Jowhar
MAREEG 22 December 2015
Magaalada Jowhar ayaa looga diyaar garoobayaa shirka maamul u sameynta Gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe kadib markiia Madaxweynaha uu ku dhawaaqay in ay noqoneyso madasha gogosha la dhigayo.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa iminka ku sugan Magaalada Baladweyne isagoo Odayaasha beelaha degan Magaaladaasi kala hadlaya arrimo ay ka mid yihiin maamul u sameynta labadaasi Gobol iyo xasradaha ka taagnaa muddooyinkii dambe Baladweyne.
Wasiirak arimaha GUDAHA UDAWAA
Wasiir Odawaa oo ka mid ah wafdi uu hogaaminayo Madaxweynaha oo ku sugan magaalada Beledweyn ayaa ugu baaqay qeybaha kala duwan ee bulshada inay kala shaqeeyaan, sidii maamulkaas dhidibada loogu aasi lahaa.
“Dowladda diyaar waxay u tahay sidii loo xoojin lahaa dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, waxaa ka codsanayaa shacabka labada gobol inay nagala shaqeeyaan dhismaha maamulkaas iyo inay isku diyaariyaan sidii Madaxweyne ay u dhan yihiin u dooran lahaayeen”ayuu yiri Wasiir Odawaa.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in dadaalada la wado ay qeyb ka tahay sidii shacabka labada gobol dib u heshiisiin looga dhex sameyn lahaa, isagoo ugu baaqay odayaasha, nabadoonada iyo waxgarad inay door ka qaataan dib u heshiisiinta.
Wareegto ka soo baxday Madaxweynaha ayaa dhowaan waxaa lagu shaaciyay in magaalada Jowhar ay marti gelineyso madasha shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe, halka caasimada maamulkaas ay noqoneyso magaalada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan.
FAGAARAHA 19aad Maxaa Xal ah 2016 Deegaan VS Qabiil 4.5
Public Participation in the Governance system: The magic power of the people.